Xiisad u Dhaxeysa Ciidamada Somaliland Iyo Dhallinyaro Hubeysan Oo Laga Soo Sheegayo Laascaanood – Goobjoog News
Xiisad u Dhaxeysa Ciidamada Somaliland Iyo Dhallinyaro Hubeysan Oo Laga Soo Sheegayo Laascaanood
Wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamo ka tirsan Somaliland iyo dhallinyaro hubeysan oo deegaanka ah.
Dhallinyaradan ayaa is abaabul ka wada xaafadaha Laascaanood, iyaga oo qaab qabiil isku diyaarinaya waxaana ay ka carreysan yihiin sida la sheegay dhallinyaro deegaanka ah oo ciidamada Somaliland ku xireen saldhigga Laascaanood.
Goob jooge ayaa inoo sheegay in dhallinyarada la xiray lagu eedeeyay falal amniga ka dhan ah, waxayna taasi keentay in dhallintii kale ee deegaanka ay hub uruursi bilaabaan, iyaga oo arrinkaasi kazoo horjeeda.
Dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood waxay ka baqayaan in lagu dhex dagaallamo magaaladaasi.
Dhanka kale waxaa Laascaanood ku sugan wasiiro ka tirsan maamulka Somaliland, waxayna halkaasi ka wadeen nabadeynta beello ku dagaallamay Sool.
Mid Ka Mid Ah Raggii Weerarka Ka Geystay Paris Oo Lagu Qabtay Dalka Belgium
Ppytyx uqqmvr Generic cialis cialis cost
Jmnobn cqohxi Brand viagra goodrx cialis
Augbex ctvizo Generic Cialis cialis dosage 40 mg
Koonfurta Suudaan: 35 Tarhiibayaal Soomaali Ah Oo Safaaradda u La’dahay Lacagtii Lagu Soo Celin Lahaa
how to get viagra without a doctor sildenafil cheap viagra 1...